Rambo eBikes dulmar - [Premium Hunting & Fishing Electric Bikes] - dieselboss
Rambo eBikes dulmar – [Premium Hunting & Fishing Electric Bikes]
Baaskiilada Rambo waxaa nashqadeeyay bannaanka ee bannaanka. Shirkadda waxaa ka go’an inay abuurto «mashiinnada safarka ee ugu dambeeya» kuwaas oo kaa caawin kara inaad gaarto halka aadan weligaa joogin oo riixi kara xuduudaha waxa aad u malaynayso inay suurtogal u tahay baaskiilkaaga.
Imtixaankan baaskiilka ee Rambo, waxaanu dabooli doonaa mid kasta oo ka mid ah 15ka baaskiilada korontada ku shaqeeya ee leh taayirrada dufanka leh ee kala duwan sanadka 2021. Waxay baaskiiladooda u qaybiyaan laba qaybood oo kala duwan, waxqabad sare iyo waxqabad xad dhaaf ah. Moodooyinka dhamaadka-sare dhamaantood waa kuwo aad u awood badan waxaana ka mid ah waxqabadka, baaxadda iyo sifooyin qiimo badan oo dheeraad ah iyo qaybo.
Dhammaan mid ka mid ah baaskiillada Rambo waa iibiyey iyada oo aan sifooyin dheeraad ahsi aad awooddo Si buuxda u habayso baaskiilkaaga qalabyada laga helo dukaanka internetka ee shirkada. Dhamaadka maqaalka waxaan si kooban u soo bandhigi doonaa qaar…
Entrada anteriorAnterior ▷▷ 2021 ▷ Odell Beckham Jr.Altura, peso, edad, novia, familia, hechos, biografía
Entrada siguienteSiguiente En la ubicación de KFC con un buffet libre